Zibhikishele isibhaxu nokuchashwa ngenhlamba izisebenzi zasePulazini - Ilanga News
Home Izindaba Zibhikishele isibhaxu nokuchashwa ngenhlamba izisebenzi zasePulazini
Zibhikishele isibhaxu nokuchashwa ngenhlamba izisebenzi zasePulazini
IZISEBENZI namalungu e-EFF kwi-Ilembe Region, ngesikhathi bekhuluma nabanikazi beSexahouse Farm emuva kwezikhalo zokushaywa kwezisebenzi.
KUSUKE isiphithiphithi izolo ngoLwesithathu ekuseni ngesikhathi izisebenzi zaseSexahouse Farm, eDriefontein, eMhlali, ngaphansi kukaMasipala wesiFunda i-Ilembe namalungu e-EFF bebhikisha, bekhala ngomqashi okuthiwa unenkontileka nabanikazi baleli pulazi, okubikwa ukuthi unesandla esilula ezisebenzini.
Izisebenzi ezine zaleli pulazi kuthiwa zisazikhotha amanxeba emuva kokushaywa yilo mqashi – ILANGA elinalo igama lakhe, eliligodlile njengoba esevulelwe amacala okuthiwa ukushaya kwakhe izisebenzi kusuke kuphelezelwa yinhlamba azichapha ngayo.
Leli phephanda lithole ukuthi izisebenzi bese zikhathele wukudindwa ngenduku, zazijuba zayokhala emalungwini e-EFF.
Ngaphandle kwenhlamba nesibhaxu, lezi zisebenzi zikhala ngokuhlala ezindlini ezingekho esimeni esigculisayo, njengoba nezindlu zangasese kuthiwa kazi-bonwa okuvela ukuthi izisebenzi zizikhulula ehlathini kunjalo nje kazinyuselwa imiholo ngaphandle kwesizathu.
Kudingeke ukuba kubizwe amaphoyisa njengoba izisebenzi namalungu e-EFF, bebevutha bengabaselwe, befuna ashiye lo mqashi njengoba kuvela ukuthi empeleni ungusonkontileka kuleli pulazi lomoba namakinati.
UMnu Sandile Ttasi (25) osebe-nza kuleli pulazi, uthi inzima impilo. “Mina wangishayela ukuthi ngafika sekudlule isikhathi emsebenzini. Ngisho ngabe ufike kusadlule umzuzu owodwa noma emibili, kumele wazi ukuthi uzo-shaywa.
“Kunozakwethu oke wamshaya qede wamgxavuna wayombhanqa nogandaganda, wagcina ngokulimala onyaweni.
“Kwavele kwabhibha lapho alimala khona, kumanje unyawo seluyabola, akasakwazi nokuha-mba kahle. Wavele wamhlalisa phansi ethi ngeke esasebenza yize kunguyena owamlimaza,” kusho uMnu Ttasi.
UMnu Sakhile Zondo ongusihlalo we-EFF esifundeni Ilembe, uthi izisebenzi kade zazikhala zingana-kiwe, zihlukunyezwa yilo mqashi.
“Zifike kithina ekuqaleni kwaleli sonto, zacela ukuba sizilekelele ngoba bezingazi ukuthi zizokhala kubani. Sivumelane ngokuthi siva-kashele abaphathi baleli pulazi, siyozwa ukuthi kungani bethule izisebenzi zishaywa, zichashwa nangehlamba.
“Isimo ezihlala kusona sifikisela ngamahloni. Abaphathi basitshele ukuthi empeleni lona oshaya izisebenzi ungusonkontileka, savumelana ngokuthi uzoke amiswe njengoba besazophenya,” kusho yena.
Ethintwa omunye wabanikazi baleli pulazi okuthiwe nguJohn ovale ucingo leli phephandaba lisakhuluma naye, lagcina lingasi-tholanga isibongo sakhe uthe lolu udaba olwangaphakathi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa abiziwe lapho bekunesixuku sabantu kuleli pulazi ebesihlanganisa izisebe-nzi ebezikhuluma neziphathimandla.
Uvumile ukuthi akhona amacala avulwe yizisebenzi zakuleli pulazi.
Previous articleKusolwa amanga kolweCeltic
Next articleIzigungu zezikole zichitha eyokufundiswa kocansi